Madaxweynaha dalka oo sheegay in booliska la isku daray lagu xoojinayo waxqabadka ciidamada – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka oo sheegay in booliska la isku daray lagu xoojinayo waxqabadka ciidamada
Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in amarkii maalmo ka hor uu soo saaray ee ahaa in la isku daro booliska caadiga ah iyo kuwa maamulka qaabilsan ee AP-da la doonayo in sara loogu qaado waxqabadkooda.
Mr. Kenyatta ayaa sido kale carrabka ku dhuftay in tallaabadaasi ay fududeyn doonto gudashada waajibaadka saraakiisha iyo bixinta adeegyada.
Madaxweynaha ayaa ciidamada la isugu geeyay hal wax ku booriyay inay si daacadnimo ay ku dheehantahay ugu adeegaan shacabka.
Sido kale waxaa uu kula taliyay inay dib u soo celiyaan sumcaddii wanaagsanayd ee ay boolisku lahayeen maadaama warbixin dhawaan la soo saaray lagu sheegay inay sameyaan falalka ugu badan ee musuqmaasuqa gaar ahaan laaluush qaadashada.
Mr. Kenyatta ayaa intaasi ku daray in saraakiisha laga doonayo inay si siman oo aanan lahayn eexasho in nin jecleysi wax ugu qabtaan dadweynaha.
Hoggaamiyaha dalka ayaa ku nuuxnuuxsaday in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo sarkaal kasta oo sameeya fal liddi ku ah sharciga wadanka u degsan, anshaxa iyo nidaamka kala dambeynta ee wax lagu maamulo.
Madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyay xili uu ku sugnaa madaxtooyada wadanka looga arrimiyo halkaasi oo ay xilalkooda kula kala wareegayeen guddoomiyaasha cusub ee guddiga qaran ee adeega booliska iyo midka kormeerka ku sameeya ciidamada ee IPOA iyo saraakiishii jagooyinkaasi hayay ee ay dhamaaday muddadii ay shaqeynayeen.
Maamulka kormeerka ku sameeya howlaha booliska ee IPOA ayaa sheegay in 6-dii sano ee la soo dhaafay uu sameeyay 760 baaritaano ah isagoo maxkamadaha u gudbiyay soo jeedin la xiriirta saraakiil lagu eedeyay waxyaabo kala duwan.
Sido kale guddoomiyaha uu waqtigiisu dhamaaday ee guddiga adeegga booliska Mr. Johnson Kavuludi ayaa sheegay in waxyaabo badan oo dhanka shaqada ah ay u qabsoomeen sannadihii uu xilkaasi hayay.
← DHAGEYSO warka subaxnimo ee idaacada star fm 8AM 03-10-2018
Wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegtay in 273 kenyaan ah ay ku jiraan xabsiyada dalalka kale ee caalamka →